Khabiirka Caqli-yare wuxuu sharxayaa Sababta aad u Isticmaalaysid Gadiidka Weyn
Tobankii sano ee la soo dhaafay, muuqaalka muuqaalka dijitaalku wax badan ayaa dhacayisbedel weyn. Dadku waxay xayireen isticmaalka mashiinnada iyo laptops si ay u raadsadaan content online. Halkii, hadda waxay dooranayaantaleefannada gacanta iyo kiniinada
Nasiib wanaag, waa sahlan tahay in la sii wado jawiga isbedelka.Mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa iyada oo loo marayo suuq-geynta fiidiyowga, oo ah qaab goosad ah. In adduunkan degdega ah, suuq geynta waa midNoocyada internetka ee internetka ku siinaya dadka isticmaala qiimaha, isku xirnaanta, iyo dabacsanaanta ay u baahan yihiin - usa igt casinos.
Sida ugu halista ah ee suuq-galinta ee suuq-geynta suuqa, suuq-galinta fiidiyowgawaxay u taagan tahay sidii hal shey oo aad isku dayi laheyd sida badeeco haddii aadan hore u isticmaalin.
Ryan Johnson, Maamulaha Sare ee Sare Sare Adeegyada Dijital ah, waxay wadaagaan sababaha loo soo iibsado suuq-geynta fiidiyowga sida hoos loogu taxay.
1. Waxay dhiirrigelisaa Brand Recall
Fiidiyowyada waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo aad u muuqda iyo maqal ah. Natiijo ahaan, way fududahayloogu talagalay dadka isticmaala inay xasuusato fiidiyowga fiidiyowga marka la barbardhigo qoraalka ku salaysan qoraalka Marka macaamilku xasuusiyo waxa aad ka kooban tahay, wuu xusuustaacalaamaddaada, taas oo keeneysa in badan oo iib ah. Macaamiisha ayaa sidoo kale laga yaabaa inay wadaagaan fiidiyowyo ay ku raaxaystaan ​​taasoo kor u qaadi doonta shabakada internetka.
2. Waxay ka dhigeysaa SEO-gaaga boggaaga.
Khibrada suuq-gareeynta ee Semalt waxay muujinaysaa tayada iyo tayadacontent content wuxuu si weyn u wanaajin karaa SEO-kaaga bogga adiga oo hagaya dadka isticmaala boggaaga. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale hagaajin kartaa adigaheerarka is-beddelka ayaa kor u qaadaya qiimaha riixaaga ee ku yaala guddiga.
3. Wanaagsan Dhammaan Qalabka
Maalmahan, awoodda darawalnimo ee suuq-geynta dijitalka waa wax jawaab ahnaqshadeynta. Haddii ay shirkaduhu ku guuldareystaan ​​inay si fiican u qabtaan barta internetka ama qalab, ganacsiga ku shaqeeya wuxuu lumin doonaa waxyaabo badangaadiidka iyo natiijada, waxay ku dhacdaa hoos u dhigista qiimaha riixa. Nasiib wanaag, suuqgeynta suuqgeynta fiidiyowga ayaa si buuxda ugu habboon adeegsigaiyadoon loo eegin qalabkee aad isticmaalayso
4. Waxay xoojisaa farriintaada farriintaada
adigoo isticmaalaya suuq-galka fiidiyowga internetka, waxaad leedahay fursad weyn oo lagu xoojinayofarriinta ayaa lagaa qaaday oo calaamad u ah shirkaddaada. Waa qalab fiican oo loogu talagalay in macaamiishaadu ay ogaadaan cidda aad si fudud u socototafaasiil sida sawirada iyo naqshadeynta iyo astaamo badan oo isku mid ah sida content iyo cod.
5. Mawduuca Fiidiyowga wuxuu si fudud u socon karaa Viral.
Inta badan dadka isticmaala fiidiyowyada gacanta waxay u muuqdaan kuwo la wadaagaya kuwa kaledadka. Koontadani waxay ka badan tahay sicirada saamiyada ay ku faanaan noocyada kale ee content. Intaa waxaa dheer, dadka badankoodwuxuu doorbidi lahaa fiidiyoow muuqaal ah marka la barbar dhigo warqad ku salaysan qoraalka. Sababtaan awgeed, fiidiyoowgu waa qalab aad u awood badancalaamad kasta oo leh ulajeeddadu inay ballaariso shabakaddeeda internetka.
Iyadoo la abuurayo muuqaalka fiidiyowga kaas oo ah cufnaanta macluumaadka, la heli karooo si sahlan loo dhexgeli karo, calaamad wuxuu horumarin karaa wakhti ballaadhan oo hagaajinta macaamiisha. Waxa kale oo uu leeyahay awood u leh inuu wax yeelodhagaystayaashaada heerkooda shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale kor u qaadista dareenka la iibsado. Macaamiishu waxay rabaan inay dareemaan wax weyn oo ku saabsan doorashooyinka iyagasameynta, iyo suuq-geynta fiidiyowga, haddii ay si fiican u qabato, waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee loo abuuro dareenkan